DEGDEG URURKA MIDNIMADA DIREED OO BAYAAN KA SOO SAARAY GUUD AHAAN ARIMAHA DEEGANKA SOMALI STATE - www.dhanbaalnews.com
Ururka UMD oo warsaxaafadeed ka soo saaray khilaafka ka taagan maamulka dawlad degaanka soomaalida Ethiopia. 27.01.2019.
Salaadiinta, boqorada, Ugaasyada, cuqaasha, saraakiisha, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka beelweynta Direed, ee ku bahoobay Ururka Midnimada Direed (UMD) waxa uu u arkaa khilaafka ka soo ifbaxay maamulka degaanka killalka 5aad ee Ethiopia (Somali State) mid laga xumaado oo hagardaamo ku noqon kara geeddisocodka iyo isbaddalka siyaasadeed ee dhanka demuqraadiyadda iyo caddaaladda loo qaaday, kana hirgalay dalka Itoobiya Itoobiya intiisa badan.
Isbeddalkaas oo ay hoggaaminayaan dhiig cusub oo uu majaraha u hayo ra`iisalwasaaraha dalka mudane Abiy Ahmed. Guud ahaan shacbiga reer Ethiopia aad bey u soo dhaweeyeen, waxaanu galiyey rajo iyo yididdiilo balaadhan oo dhanka horumarka iyo nabadgalyada dalka Ethiopia iyo waddamada la jaarka ah ee ku yaalla geeska Afrika.
Shacabka soomaalida ah ee ku nool killilka 5aad ee Ethiopia (Somali State) waxay kala mid yihiin dareenka guud iyo soo dhaweynta isbaddalka cusub shucuubtaas faraha badan ee dalka.
Waxaaase nasiibdarro noqonkarta hadii madaxweynaha kumeelgaadhka ah ee killilka 5aad Mustafe Cagjar uu la jaanqaadi kari waayo isbeddalkaas siyaasadeed ee shacbiweynaha soomaalida Ethiopia inbadan sugayeen, maantana ay si farxad leh ku soo dhaweeyeen.
Dhanaka kale waxa iyaduna layaab leh oo Ururka Midnimada Direed si culus u cambaareyneynaa in jabhaddii ONLF, iyo kooxihii la magacbaxay Dulmidiid, ay maanta noqdaan Dulmidoon, kuna tashadeen inay ku dhegenaadaan sadbursigii xaaraanta ahaa ee ay muddo dheer ku haysteen maamulka degaanka soomaalida Ethiopia.
Waxa taas ka sii daran in Telefishinkii SRTV uu noqdo mid loo isticmaalo qabyaalad foolxun iyo iskudirka shacbiga soomaaliyeed. Arintaas waxa ka dhalan kara amnidaro iyo colaad sokeeye oo qabiillada soomaalida ka dhexdillaaca. Sidaas darteed waxan soo jeedineynaa in degdeg tallaabo sharci ah looga qaado shakhsiyaadka ka masuulka ah warfaafinta dawlad degaanka, gaar ahaan telefishinka SRTV.
Beelweynta Direed oo ah beesha ugu balaadhan umada degta killalka 5aad (Somali State) mudo badana xaqdaro lagu hayey, waxay u soo jeedinaysaa kooxahan boobka u socda in ay candhuufta dib u liqaan oo u diyaargaroobaan in ay dadka soomaaliyeed ee walaalahood ah si caddaalad ah wax ula qaybsadaan.
Waxa aad tihiin hal qabiil oo ka mid ah 36ka qabiil ee soomaalida ah, mana dhici karto in aad kaligiin magacooda afduubataan. Waxa aad heleysaan saamiga aad xaq u yeelataan oo kaliya, waanad ku khasbantihiin in aad ku qanacdaan, sida dadka kale ee idinla midka ah.
Awoodda iyo maamulka xisbiga talada haya ee ay ku mideysanyihiin shacbiga soomaaliyeed, waa in si caddaalad ah oo siman ay u qaybsadaan 36ka qabiil ee deggan dalka.
Beelweynta Direed ma aqbaleyso, mana dhici karto in la yidhaahdo gobolladii iyo degmooyinkii sida xaaraanta ah lagu dhisay ayaa laga soo xulayaa xubnaha iyo wakiillada xisbiga. Taasi waa caddaalad xumadii aynu ka guureynay oo dib loogu noqon maayo.
Ugu dambeytii waxan bogaadineynaa oo aan taageero buuxda la garab taagannahay guddoomiyaha xisbiga dimuqraaddiga shacbiga soomaaliyeed, ahna wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Ethiopia mudane Axmed Shide iyo ra`iisal wasaaraha dawladda federaalka Ethiopia mudane Abiy Ahmed.
Guddiga Fulinta ee UMD.